Barnaamijyada caymiska baabuurta dhulka | Androidsis
Miguel Gaton | | Codsiyada Android
Dhibaatada coronavirus iyo xaalada hada jirta ayaa sababay a dardargelinta dijitaalka shirkadaha, meherado iyo dukaanno. In kasta oo aan u maleynay in wax walboo horeyba dijitaal u ahaayeen, wali waxaa jiray qaybo ama shirkado leh boos celin badan markii ay aheyd u soo bixida internetka. Xaqiiqda ah in shirkadaha sida mashiinnada caymiska dhijitaalka ah ay ka go'an tahay hal-abuurnimadu wali waa war wanaagsan, maaddaama qandaraas qaadashada caymisku ay tahay waxqabad joogto ah oo qof walbaa ay tahay inuu sameeyo.
doppo waa mid ka mid ah barnaamijyadan dhijitaalka ah ee isku soo koobay dijitation-keeda, oo bixiya a barnaamij u oggolaanaya maareynta caymiska deg deg ah oo raaxo leh, laga bilaabo taleefanka gacanta, macaamiishaada. Tan macnaheedu waa taas, hadda, haddii aad leedahay a caymiska guud ee doppo, waad la socon kartaa taariikhda adiga oo aan ka tagin fadhiga salootada.
1 Faa'iidooyinka hal-abuurkan ku jira caymiska baabuurta
2 Sidee loo helaa barnaamijyadan?
Faa'iidooyinka hal-abuurkan ku jira caymiska baabuurta
Dhab ahaantii qaar badan oo naga mid ah ayaa yeelan doona ama ku khasbanaan doona inay fuliyaan habraacyada la xiriira caymiskayaga, haddii ay tahay isbeddelada xogta shakhsiga ah, soo sheegno qayb ka mid ah sheegashada, beddelka caymiska, iwm Iyo maareynta khadka tooska ah ee nidaamyadan ayaa ka dhigaya kuwo aan daalin.
Haysashada codsiyada hawl maalmeedku ma aha oo kaliya waxtar sababta oo ah sahlanaanta isticmaalka. Keydinta kumeelgaarka ah ayaa fure u ah maadaama aanan u baahnaan doonin inaan waji ka waji u wajahno wixii isbeddel ama wax ka beddel ah ee aan uga baahanno caymiskayaga. Intaas waxaa sii dheer, iyada oo la tixgelinayo xaalada qaawan ee aan ku nool nahay, ka fogaanshaha qaxa waa ficil bulshada ka caawiya kana hortageysa in aan jirranno.
Tan waa inaan ku darnaa kharashka deegaanka. Dabcan, ma guurno mana dhaqaaqno, laakiin kumana isticmaalno kumanaan waraaqo ah fulinta howlaha ama qandaraasyada. Ma weydiisan kartaa wax intaa ka badan?
Sidee loo helaa barnaamijyadan?
Aad u fudud! Sida kuwa kale, iyada oo loo marayo liiska xulashooyinka ay bixiso Google Play loogu talagalay dadka isticmaala Android ama iyada oo loo marayo App Store loogu talagalay kuwa jecel tufaaxa. Dhammaan tas-hiilaadka labada isticmaale ee ugu khibrada badan iyo kuwa bilowga ahba. Waligeed waaxda caymiska si sahal ah looma heli karin!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Car barnaamijyadooda caymiska baabuurta dhulka
Sida loo xakameeyo farriimaha tooska ah ee 'Instagram'